कोरोना सङ्क्रमित भए नभएको अब, नेपाल टेलिकमले पत्ता लगाउने - ePosttimes
Homeसमाचारकोरोना सङ्क्रमित भए नभएको अब, नेपाल टेलिकमले पत्ता लगाउने
३ बैशाख २०७७, बुधबार ०२:३९ समाचार, हाम्रो सरोकार 0
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले कोरोना भाइरसबाट आफ्ना प्रयोगकर्ता सङ्क्रमित भए नभएको पत्ता लगाउने प्रयास थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले मङ्गलबारदेखि नयाँ प्रणाली विकास गरेको छ । जसबाट टेलिकमका प्रयोगकर्ताले आफ्नो अवस्था जानकारी दिनसक्ने छन् ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार प्रयोगकर्ताले आफ्नो नम्बरबाट *१४१९# डायल गरेर त्यहाँ सोधिएको उत्तर दिनुपर्ने छ । टेलिकमले त्यहाँ चरणबद्ध प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरेको छ । ज्वरो आए नआएको, खोकी लागे नलागेकोजस्ता प्रश्न त्यसमा सोधिएको छ । उत्तरमा दुईवटा मात्र विकल्प राखिएकाले प्रयोगकर्ताले १ वा २ अङ्क थिचेर प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने छन् ।
311100cookie-checkकोरोना सङ्क्रमित भए नभएको अब, नेपाल टेलिकमले पत्ता लगाउनेyes
विवादास्पद खरिद सम्झौता रद्द भएपछि स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिने तयारी बेलका नगरपालिका सहित उदयपुर जिल्लामा २४५ जना होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै डा.शर्माद्वारा कोरोना रोकथाममा सहयोग : पथरी शनिश्चरेको कोषमा १ लाख ११ हजार प्रदान मितेरी बैंकद्वारा धरानको कोरोना राहत कोषमा २ लाख रकम सहयोग सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनमाथि सरकारको सोधपुछ हतुवागढी गाउँपालिकाका एक युवकमा कोरोना (आरडीटी) टेष्टमा पोजेटिभ देखियो यायोक्खा केन्द्रिय सचिवालयको अनलाइन बैठक बस्यो, यो बर्ष साकेला घरैमा मनाउने निर्णय कानेपोखरी गाउँपालिका समाज हङकङको सहयोग मृगौला पीडितलाई
सपनामा देखेको कुराले बिपनालाई के संकेत गर्छ ! बस्तुशास्त्रीको तथ्य खुलासा यस्तो छ